သိုင်းရွိ်ုက်ဂလင်းကြီးခြင်း (Goitre) အတွက်သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့ အစားအစာများ (Natural remedies for Goitre) | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
Goitre ဆိုတာ လည်ပင်းရှေ့ဘက်ရှိ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းတွေထုတ်လုပ်ပေးရာ ဂလင်းတစ်ခုကြီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင် ရှိမှန်းမသိသာလှပေမယ့် ရောဂါတစ်ခုခုကြောင့် ကြီးမားလာပြီဆိုရင် လည်ပင်းရှေ့အလယ်ပိုင်းလောက်မှာ ဖောင်းကားလုံး၀န်းလာတဲ့ သိုင်းရွိုက်ဂလင်းကို အလွယ်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ နဂိုအရွယ်ကသေးငယ်ပြီး လိပ်ပြာပုံသဏ္႑ာန်နဲ့ လည်ဇလုတ်ရဲ့ အောက်ဖက်မှာတည်ရှိတယ်။ သူကထုတ်ပေးတဲ့ ဟော်မုန်းတွေက ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ ဇီ၀ကမ္မစနစ်ရဲ့ လုပ်ငန်းတာ၀န်အားလုံးကို ထိန်းချုပ်ပေးပါတယ်။ ကြီးမားလာတဲ့ သိုင်းရွိုက်ဂလင်းဂွိုက်တာဟာ ပုံမမှန်အလုပ်လုပ်နေတဲ့၊ မကျန်းမာတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ သိုင်းရွိုက်ဂလင်းကို ကြီးမားလာစေတဲ့ အကြောင်းတွေကြောင့် ဟော်မုန်းတွေပိုထွက်လာစေလို့ Hyperthyroidism အိုဗာအက်ရှင်တွေဖြစ်ပေါ်ခံစားလာရတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် ဖိနှိပ်ခံထားရတဲ့ အခြေအနေတွေဆိုရင်လည်း သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းတွေလုံလောက်အောင် ထုတ်မပေးနိုင်တော့ Hypothyroidism သိုင်းရွိုက်ဂလင်း ချွတ်ယွင်းအားနည်း ရောဂါခံစားလာရစေပါတယ်။ ဂွိုက်တာဖြစ်လာရင် ကြီးမားလာတဲ့ဂလင်းက လည်ပင်းအတွင်းရှိ လေပြွန်နဲ့အစာရေမျိုအပေါ်ကို ဖိအားပေးတဲ့အတွက် တင်းကြပ်တစ်ဆို့ခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်း၊ အစာမျိုရခက်လာခြင်းတွေ တွေ့လာရပါတယ်။ အသက်ကြီးလာသူတွေ၊ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဂွိုက်တာအဖြစ်ပိုများပါတယ်။
လည်ပင်းရှေ့ တဖြည်းဖြည်းကြီးမားလာတဲ့ သိုင်းရွိုက်ဂလင်းဟာ တစ်ဆို့မှုတွေ မဖြစ်သေးခင်မှာ လူနာကိုယ်တိုင်နဲ့ ဘေး လူတွေအမြင်မှာ သိသာထင်ရှားလာပါတယ်။ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းများ ပမာဏ စစ်ဆေးခြင်း၊ ဓာတ်မှန်နဲ့ အာလ်ထရာဆောင်း အကူအညီနဲ့ ဂလင်းရဲ့ အရွယ်အစားတည်နေရာ တိုင်းတာခြင်းနဲ့အခြား ဇီ၀ကမ္မစနစ်တွေ ထိခိုက်မှုဘယ်လောက်ရှိနေတယ် ဆိုတာသိရဖို့၊ သက်ဆိုင်ရာဆရာ၀န်များထံ သွားရောက်ပြသကာ ကုသမှုခံယူထိုက်ပါတယ်။
သိုင်းရွိုက်ဂလင်းကြီးထွားမှု လျော့နည်းစေရန်နဲ့ ကျန်းမာစေရန် လို်က်နာသင့်တဲ့ အချက်များ
1. အိုဗာအက်ဆစ် Over active ဖြစ်နေတဲ့ သိုင်းရွိုက်ဂလင်းကြောင့် အသားတစ်သျှူးတွေ ဆုံးရှုံးမှုများပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေ့စဉ် စားတဲ့အထဲမှာ အသားဓာတ်ပိုများပါအောင်စားပေးသင့်တယ်။ အသားရှောင်သူဆိုရင်လည်း၊ အသားဓာတ်ပါတဲ့ ပဲအမျိုးမျိုး၊ နို့နဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို အစားထိုးကာ များများစားသင့်ပါတယ်။
2. သိပ်၀နေသူဆိုရင် အဆီအဆိမ့်အငန်ကဲတာ ရှောင်ကြဉ်သင့်တယ်။ အမြန်စာ၊ ဆီကြော်မုန့်မျိုးစုံ၊ နှစ်ပြန်ကြော်တွေနဲ့ ပုံပြောင်းဆီပါ၀င်တဲ့ အစားအစာအားလုံး ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ လမ်းသွက်သွက်လျှောက်တာ၊ ရေကူး၊ အပြေး စသဖြင့် အားကစားတစ်မျိုးမျိုးနေ့စဉ် ပြုလုပ်ပြီး အ၀လွန်နေတာကို ၀ိတ်ချသင့်ပါတယ်။ အစားကိုလည်း တရားလွန်မစားမသောက်သင့်ဘူး။
3. ဘုံဘိုင်ရေ (Tap Water) တွေထဲမှာ ဖလူအိုရိုက်တို့၊ ပါကလိုရိတ် Fluoride & Perchlorate စတဲ့ အရာပစ္စည်းတွေ ပါ၀င်တာ မို့ နဂိုကျန်းမာနေတဲ့ သိုင်းရွိုက်ဂလင်းကို ပြဿနာများလာစေသလို၊ ရောဂါဖြစ်နေတဲ့အခါ ပိုတောင်ဆိုးရွားလာစေတဲ့အတွက် Tap water မသောက်ဘဲ၊ သဘာ၀ရေနဲ့ ရေသန့်ပုလင်းတွေသာ သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။
4. ဟိုက်ပိုသိုင်းရွိုက် ဖြစ်နေတာဆိုရင်တော့ အိုင်အိုဒင်းကြွယ်၀တဲ့ နို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေ၊ ပင်လယ်ငါးတွေ ပင်လယ်ငါးခြောက် တွေ၊ ပင်လယ်ရေညှိတွေ၊ ခုံးကောင်နဲ့ ကမာတွေကို စားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။ အိုင်အိုဒင်းကို ခန္ဓာကိုယ်က အတော်အတန်ပမာဏ ဆိုရင် ခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။ လိုအပ်တာထက်အများကြီး ပိုမိုစားသုံးပါမှ ကာလကြာရှည်လာရင်တော့ လူကိုဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။
5. ပဲပိစပ်မှာပါတဲ့ အိုင်ဆိုဖလေဗုန်း (Soy Isoflovone) တွေ အများကြီးစားရင် ဟိုက်ပိုသိုင်းရွိုက်၊ ဂွိုက်တာနဲ့ သိုင်းရွိုက်နိုဂျူး အကျိတ်တွေ ဖြစ်စေဖို့ လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သလိုဖြစ်ပြီး အဆိုပါ သိုင်းရွိုက်ဂလင်းရောဂါတွေကိုပါ ပိုဆိုးရွားလာစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒါတွေကို အလွန်အကျူးမစားသင့်ဘူး။
6. ကလေးတွေမှာ တစ်ခါတစ်ရံ၀မ်းပျက်၀မ်းလျှော ကြာလွနး်ရင် ဖြစ်ဖြစ်၊ လက်တေ့အင်ဇိုင်းချို့တဲ့လို့ နို့ကို အချေဖျက်နိုင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်အခါအားလျော်စွာ ပဲနို့ Soy Based Formular တွေကို ညွှန်ကြားကာတိုက်ကျေွးခိုင်း တတ်ကြပါတယ်။ ခဏတစ်ဖြုတ်သာ တိုက်ကျေွးသင့်ပြီး ရက်၊ လများစွာကြာအောင် ပဲနို့ကို သရေစာအဖြစ် နေ့စဉ်မတိုက်သင့်ပါဘူး။ အကြာကြီးတိုက်နေရင်၊ နောက်ပိုင်းမှာ သိုင်းရွိုက်ရောဂါတွေ ဖြစ်ပေါ်ခံစားလာရစေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးတွေလည်းပဲနို့ကို နေ့စဉ် အများကြီးမသောက်သင့်ပါဘူး။
7. ဆေးလိပ်သောက်ရင် ဆေးလိပ်ချက်ချင်းဖြတ်သင့်သလို ဆေးလိပ်ငွေ့ကိုတစ်ဆင့်ခံအဖြစ်တောင် မရှူရှိုက်သင့်ပါဘူး။ ဆေးလိပ်ငွေ့က သိုင်းရွိုက်ဂလင်းကိုပျက်စီးစေလို့ ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။
8. နေ့စဉ်ဘ၀မှာ စိတ်ဖိအားတွေ၊ စိတ်တင်းကြပ်တာတွေ လျော့နည်းအောင်ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ယောနီသော မနသီကာယ ဆိုတဲ့ စကားလို အသင့်အတင့်သာ နှလုံးသွင်းထားနိုင်အောင် လေ့ကျင့်သင့်ပါတယ်။ ဘာသာတရားလေ့လာအားထုတ်ခြင်း၊ တရားထိုင်ခြင်း၊ ခရီးထွက်ခြင်း၊ ဝါသနာပါရာ စာပေ၊ ဂီတ၊ အနုပညာတစ်ခုခု လေ့လာလိုက်စားကာ အပန်းဖြေခြင်း၊ အလုပ်ချိန်မှာ အလုပ်ကျေပွန်အောင်လုပ်ကိုင်သလို မိသားစုနဲ့ စည်းလုံးစွာအချိန်ပေးကာ အတူပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းခြင်း စသဖြင့်ပြုလုပ်ကြမယ် ဆိုရင် နေ့စဉ်စိတ်ဖိအားတွေကို အလွယ်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ဖိအားတွေ များပြားလွန်းလေ၊ သိုင်းရွိုက်ဂလင်းကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေလေဖြစ်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း အချန်မှန်ပြုလုပ်ခြင်းကလည်း စိတ်ဖိအားကျဆင်းစေ၊ ဘောဒီ၀ိတ်လည်း ကျဆင်းစေ၊ ကျန်းမာရေးလည်း ညီညွတ်စေ၊ သိုင်းရွိုက်ဂလင်းရဲ့ လုပ်ငန်းတွေကိုလည်း ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။
9. ဟိုက်ပါသိုင်းရွိုက်ဖြစ်နေတာဆိုရင်တော့ အိုင်အိုဒင်းကြွယ်၀တဲ့ အထက်ပါ ပင်လယ်စာတွေ၊ ပင်လယ်ထွက်ကုန်တွေ၊ နို့နဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေ၊ အိုင်အိုဒင်းဖြည့်စွက်ဆားတွေ၊ ဆားကဲထားတဲ့ အစားအစာတွေကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ ဖြစ်ပွားနေတဲ့၊ ဟိုက်ပါသိုင်းရွိုက်ရောဂါကို ပိုဆိုးရွားစေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ အိုင်အိုဒင်းဆားကလည်း ဖြည့်စွက်တဲ့ အိုင်အိုဒင်းပမာဏက ဆားအိတ် တိုင်း၊ ဆားမော်လီကျူးတိုင်းမှာ သမမျှတစွာ ပါရှိအောင်ထည့်သွင်းဖြည့်စွက်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ အိုင်အိုဒင်းပိုပါတဲ့ ဆား၊ လျော့ပါတဲ့ ဆား၊ လုံး၀မပါတဲ့ ဆားဆိုပြီး အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဟိုက်ပါသိုင်းရွိုက်ဖြစ်နေလို့ရှိရင် ရိုးရိုးဆားသာ သုံးဆောင်သင့်ပါတယ်။
သိုင်းရွိုက်ဂလင်းမှာ ပုံမမှန်တစ်ခုခုဖြစ်နေရင် ဟိုက်ပိုလား၊ ဟိုက်ပါလား ကွဲပြားစွာသိရှိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ တွေ့ရှိချက် စမ်းသပ်ချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီး ကုထုံးတွေက အမျိုးမျိုးကွဲပြားသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ သိုင်းရွိုက်ဂလင်း သိသာစွာကြီး မားလာတယ်ဆိုရင် တခြားလက္ခဏာတွေပြတဲ့ အဆင့်အထိ မစောင့်တော့ဘဲ နီးစပ်ရာ ဆရာ၀န်ကြီးများထံသို့ အလျင်အမြန် သွားရောက်ပြသသင့်ပါကြောင်း၊ ထိရောက်တဲ့ကုသမှုကို အမြန်ရယူသင့်ပါကြောင်း တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။